Cunto: Muxuu Yahay Waxyaabaha Cusub ee Muhiim u ah Website-kaaga iyo SEO
Dhab ahaan, makiinadaha raadinta waxay leeyihiin saameyn weyn oo ku saabsan sida website-yadu u noqon lahaayeendhistay. Inta badan makiinadaha raadinta ayaa xooga saaraya tayada maadadaiyo cusbooneysiinta wakhtiyada. Sidaa darteed, si aad u sii wadato, waa inaad cusboonaysiiso content-kaagahad iyo jeer. Julia Vashneva, Maamulaha Guusha Macaamiisha ee Semt Adeegyada Dijital,sharaxaad ka bixinayaan sababta macnaha cusub uu yahay qodobka ugu muhiimsan ee keenaya guusha website-kaaga.
1. Dhaqdhaqaaq Joogta ah ee Raadinta Raadinta
Haddii website-kanaga si joogto ah loo cusbooneysiiyo maqaalada iyo boggaga cusub, ka dibna raadi mashiinkagawaarida ayaa booqanaya goobtaas si joogta ah. Waxay micnaheedu tahay in taxadirka goobtaada ay tagi doontodhakhso ah. Marka mashiinka raadinta booqdo goobtaada si joogto ah, waxaad ku guuleysan kartaa darajooyinka sarehaddii maadadaada qiimo leedahay. Mar kasta oo aad ku darto mowduuc cusub boggaaga, makiinadaha raadintaqaado xusuusta iyo dib u habeynta liiska darajadaada. Sidaas, cusbooneysii website-kaagasi joogto ah si loo kordhiyo fursadaha helitaanka darajo sare.
2. Kordhinta Awoodda Awoodda Website-ka
Istaraatiijiyada muhiimka ah ee kor u qaadida awoodda shabakadaada ayaa abuureysa waxyaabo dheeraad ah.Soo daabac qiimo badan oo qiimo leh, oo aad si cad u siin doonto boggaaga aawoodda awoodda badan..Haddii aad sameyso dib u eegista goobaha maamulka ee ku yaal naftaada, adigawaxay ogaan doonaan in ay leeyihiin kumanaan bog oo laga helo Google. Haddii aad tahaygo'aansadeen inay ku biiraan horyaalkooda, markaa waa inaad daabacdaa waxyaabo badan oo ku haboon. Haddii adigawaxay si joogta ah u qoraan waxyaabo badan oo ku saabsan mawduuc gaar ah, waxaad ka heli doontaa kalsoonidadka iyo matoorada. Natiijada maamulka ee goobtaada ayaa kor u qaadi doonta intaad heshokalsooni badan iyo in ka badan. Abuuri sumcaddaaga adigoo firfircooni ku leh mareegaha warbaahinta iyo warbaahinta bulshada.
3. Mawduuc Macluumaad Dheeraad ah oo Fure ah
Markaad abuurto marxalad cusub, si joogto ah ayaad uga heli kartaa ereyada muhiimka ah. Adigoo abuuraya ereyo muhiim ahmaqaalad diirada saaran, waxaad heli doontaa fursad aad ku bar-tilmaameedsatid badan oo soo booqda. Makiinadaha raadintaayaa sidoo kale aqoonsan doona goobtaada oo kuu soo diri doona marti dheeraad ah. Inkastoo Google uusan saldhig u ahaynmiisaan aad u badan oo ku saabsan tirada ereyada muhiimka ah ee boggaaga internetka, weli waa muhiim in la meeleeyoereyada muhiimka ah ee ku jira iyo agagaarka maqaalkaaga. Ereyada waxaa isticmaala matoorada raadinta si ay u muujiyaan adigagoobta ku salaysan mawduuca. Xasuuso inaadan waligaa ku qorin maqaalkaaga ereyada muhiimka ahwuxuu soo jiidi doonaa ciqaab ka sameysan mashiinno raadin.
4. Akhri Akhri Akhristayaashaadu Wey Xireen
Dayactirada joogtada ah ayaa sii wadi doona macaamiishaada iyo dadka soo booqda si joogto ah dhacdooyinka iyo isbedeladaee warshadahaaga. Maaddooyinka cusubi waxay awood u leeyihiin inay soo booqdaan macaamiisha cusub.Adigoo daabacaya macluumaad cusub marar badan, waxaad daawan doontaa dhagaystayaashaada. Tani waxay noqon doontaawaxay ku kasbanyihiin daacadnimo mudo dheer ah macaamiisha, sidaas awgeed boggagaaga ayaa ku sii kori doona caan ah iyodarajo. Bixi martidaada adiga oo ku qanacsan macluumaadka ku saabsan alaabtaada iyo adeegyadaada.U sheeg dadka martida ah faa'idooyinka alaabtaada iyo sababta ay ugu baahan yihiin. Marka adigaSiiyaan macluumaad ku filan macaamiisha mustaqbalka, waxaad ka caawineysaa inay sameeyaan doorashada saxda ah,oo waxay u badan tahay inay soo iibsadaan alaabtaada Source .